Raadinta si loo helo hab fudud si ay u maareeyaan files music aad? In badan oo naga mid ah music ayaa ku kaydsan naga desktop ama laptop iyo waxa ku adag inay iyaga guraan. Way fududahay in la fahmo dhibaatada - waxaan keydin karaa files music galalka kala duwan. Waxaa jiri kara hal hawl ah ee files badan music. Plus, oo aad ka heli lahayd badan oo ay adag tahay in guraan music haddii ay unorganized.
Tani waa sababta oo ah tifaftiraha tag audio caawisaa.
Software editor Tag waa hab fiican si ay u maareeyaan files music ah. Ururinta Well-tagged ku siinayaa pool habaysan oo u sahashay in ay baadhaan. Sidaa darteed, kuwaas oo software ugu fiican ee kaa caawinaya inaad DEAD ururinta music aad?
TuneUp waa dar-on a faa'iido u Lugood. TuneUp waa mid fudud in la isticmaalo oo lagu qaado database weyn ee faraha si ay u sameeyaan nadiifinta aad music inta badan ka sahlan. Its free version waa xadidan iyo waxa aad maamuli kartaa dhowr heeso. Full Version waa aan xad lahayn oo ku siinayaa muuqaalada dhamaystiran. Waxa uu baaritaanku ku dhawaad ​​2000 kuwan raadkaygay ku dhowr daqiiqo, taas oo si dhakhso ah waa. Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Audio tag tifaftirayaasha halkaas oo waxba ma ahan in aad isticmaalayso Mac ama Windows, aad hubiso in ay u jecel yihiin.
Support: Windows iyo Mac Rating: 3.5 / 5
- jiita Simple iyo hoos u feature
- database weyn ee faraha loomana baahno in ku dhowaad 90 million.
- interface waa qayb muhiim ah oo Lugood
- Iyadoo maktabadda xajmi culus, ay jirto wax dhibaato ah oo shil laakiin horumarinta qaadanayso daryeelka waxaa ka mid ah.
- waxa ay xirtey ka dambeeya Lugood halkii furitaanka waxaa la. Waa waxba la taaban karo, laakiin waxaad uun laga yaabo in ay u doorbiday haddii kale.
Waa mid ka duwan in Lugood haddii aad jeceshahay in aad muusiko ku nidaamka Windows. Ka dib markii ay soo degida ururinta music soo galeen Media Daanyeer, waxaad kartaa tags fudayd ilo sida Freedb iyo Amazon u cusbooneysiin. Haddii aad qabto dhammaystirnayn ama sax ahayn, ID3 Tags waxa ay cadeyso si toos ah oo adiga kuu wargalisa.
Price: $49.95 u Lifetime License.
-. Waxa si toos ah calamada xumeeya ama jaanqaadayn ID3
. - Waxa si toos ah u qabanqaabisaa music ee fayl ku xiran ID3 ah
- kuwa raadinaya in ay nadiifiso calanka, version lacag la'aan ah si fiican u qalabaysan in ay in.
- Waxaa kaliya ee nidaamka ka hawlgala Windows oo ka shaqeeya si madax-bannaan ka mid ah ciyaartoyda music.
- Price waa ka dheeraa midka kale.
Waxay leedahay ballaaran faafidda user saldhig tan iyo markii ay sii daayo. Ma jiraan habka iswada badan oo ku lifaaqan waxaa la by siineysaa kantarool ah oo qoto dheer ka badan baahida tagging aad. Waxa uu isticmaalaa Freedb ay ku darto macluumaadka si faylasha aad. Waxaad ka heli edit sanduuqa deg deg ah haddii aad rabto in aad si deg deg ah wax ka bedel.
- siineysaa kantarool weyn ee aad tagging files faahfaahinta daqiiqo.
- Waa lacag la'aan.
- edit doorasho Quick haddii aan xiiso tags dahsoon.
-. Development la joojiyey halkan ka jirin cusboonaada ee dheeraad ah waxaa laga filayaa
- Ma jirto caawinaad online, sidaa darteed laga yaabaa in aad iyada oo qod si aad u hesho laalaadaan ee software-ka.
MusicBrainz uu leeyahay user hayo metadatabase. Waxa intaa dheer in la isticmaalayo macluumaadka la heli karo file ah, waxa kale oo isticmaala fingerprintings loomana baahno. Picard sida sameeysa ayaa isticmaala xeel qalab tagging, taas oo uu leeyahay oo dhan qaababka ugu dambeeyey iyo iskaanka awood badan. Waa il furan, sidaa darteed aad u tweak kara baahidaada.
Support: Windows, Mac OS iyo Linux. Rating: 4/5
-. Waa il furan oo halkan joogta updates lagu sii daayo
. - iskaanka iyo jiididda-dhibic muuqaalada Automatic
- Sida dadka isticmaala ay u ilaaliyaan database, waa database ballaaran, kuwaas oo si joogto ah uu updated.
-. Sida isticmaala macluumaadka galaan, macluumaadka waxaa laga yaabaa in aysan sax ahayn mararka qaarkood
- Scanning laga yaabaa in gaabis la maktabadda weyn.
Qalab MP3 tagging ayaa interface dareen leh ka dhigaya wax walba oo fudud. Isticmaalka qalab this, aad MP3 tags iyo sidoo kale tags gaar ah oo aad edit karaa. Haddii aad leedahay magaca file kaas oo isticmaala macluumaadka kala duwan ee horyaalka, waxaad samayn kartaa qaab beddelidda galay tags dhabta ah.
Windows iyo OS MAC: Support. Rating: 3.5 / 5
- database-interface dareen iyo isticmaalka ka Freedb, Amazon, Discogs iwm
- tags aad dib karaa in ay ka fogaadaan arrimaha sida tag musuqmaasuqa iwm
- bedelayaan ku salaysan Expression in ay oggolaadaan in reformatting aad ee files magaca Hababka.
- Waxa muuqata in yar oo heer hoose si kale sida shaqada badan waxaa lagu sameeyaa gacanta.
- aad u baahan tahay si download, downloader ah inaad kala soo baxdo iyo gashato taasi, xataa marka ay le'eg yahay kaliya 3 MB.
In kastoo Foobar200 waa ciyaaryahan music laakiin waxa ay sidoo kale ku siinayaa feature weyn in DEAD fursadaha tafatirka. Waxaad hagaajin karo arrimaha tag xitaa halka ciyaaro music ah, wax qalab badan tagging kale ma aad samayn kartid. Waxay ku siinaysaa xooggan, iyo doorasho iskaanka si toos ah. Waxaa jira customizations badan oo ka users kala duwan oo si aad doorashooyin aplenty.
Price: Waa lacag la'aan ah si ay u soo bixi
Support: Windows XP iyo wixii ka sareeya Rating: 4/5
-. Waa ciyaaryahan music in aad siinaysaa awood sixiddiisa
. - fursadaha Customization Great marka la barbar dhigo software kale si ay u eegto wanaagsan
- isticmaalaa Freedb waafajinta macluumaad ah ee tags, taas oo ah warar lagu kalsoon yahay.
- Sida ay tahay ciyaaryahan laftiisa in ka duwan qaar ka mid ah software editor tag audio kale, tafatir tag aysan ciyaartoy kale oo music shaqeeyaan.
- customizations Qaar ka mid caqabad karaa waxqabadka software ah, oo aad u baahan tahay inaad taxaddar marka samaynta beddelka ah.
Ka hor inta degsado software ah, fadlan booqo goobaha tagaan iyada oo ay buugagan Hanuuniyaa. Fiiri qiimaha oo ah sida ay sii beddelo la updates cusub.
> Resource > Music > The Best 6 Tag Audio Editor Software Available Maanta